महामारी जित्न सघाउँदै मनकारीहरू | मगरात समाचार
घर समाचार महामारी जित्न सघाउँदै मनकारीहरू
कपिलवस्तु जिल्ला अस्पतालमा पीपीई, मास्क र ग्लोब्स अभाव थियो । ती सामग्री धोएर पुनः प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आयो । अक्सिजन सिलिन्डर अभाव भयो । बिरामीको छटपटी देखेर डा. गणेश क्षत्रीले फेसबुक स्टाटस लेखे– ‘अवस्था बेहाल छ, सहयोग गर्नूस् । डाक्टरलाई उत्प्रेरणा दिनूस् ।’
कान्तिपुर दैनिकमा यो समाचार प्रकाशन भएपछि मनकारीले सहयोग बढाए । पछिल्लो १० दिनमा अस्पतालका लागि २९ लाख रुपैयाँ नगद जुटेको छ । १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको स्वास्थ्य सामग्री संकलन भएको छ । सुरुमा तौलिहवा चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष गोपीकृष्ण शर्माले सहयोग अभियान चलाए । ‘१५ थान सिलिन्डरका लागि अभियान चलाएँ,’ उनले भने, ‘शनिबार र आइतबार मात्र ३० वटा अक्सिजन सिलिन्डरका लागि रकम जम्मा भयो ।’ उनले तीन दिनमा ९ लाख रुपैयाँ बढी संकलन गरे । त्यसबाट ३० वटा अक्सिजन भरिएको सिलिन्डर खरिद गरेर अस्पताललाई प्रदान गरे । उनीसँग १ लाख ८० हजार रुपैयाँ अझै बाँकी छ । मायादेवी गाउँपालिकाले अस्पताललाई २ लाख सहयोग गरेको छ ।
महाराजगन्ज नगरपालिकाले ५ लाख, विजयनगर गाउँपालिकाले ५ लाख, बुद्धभूमि नगरपालिकाले ३ लाख, यशोधरा गाउँपालिकाले ३ लाख, तिलौराकोट साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिले ५ लाख, सनसाइन सामाजिक विकास संस्थाले १ लाख ११ हजार रुपैयाँ प्रदान गरेका छन् । त्यस्तै २० जनाले अस्पतालको खातामा १ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म सहयोग पठाएका छन् । ‘स्थानीयले गरेको सहयोगबाट उत्साहित छौं,’ डा. क्षत्रीले भने, ‘अब मेडिकल इक्युपमेन्टको अभाव रहेन ।’ अन्य एक दर्जन संस्थाले नगद र स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेका छन् ।
प्रकाशित : जेष्ठ ४, २०७८ ०७:१०
अघिल्लो लेखमाबीएन्डसीलाई कानुनविपरीत सिफारिस
अर्को लेखमानेपाल छाड्दै विदेशी